Ukuthelekisa iSketchUp kwezinye iiNkqubo zeModeli ze3D
Phakathi kwezicelo ezikhoyo ze-3D ezikhoyo, iSketchUp yeyona ilula ukuyisebenzisa. Le software iphumelele ngesizathu esinye: Kwiiyure ezimbalwa zokuphehlelela iSketchUp okokuqala, unokufumana ngokwaneleyo kwiSketchUp ukwakha into. Awunazo iincwadi ezingqindilili onokuzifunda, kwaye akukho miba ikhethekileyo yokuqonda onokuthi uyiqonde. Ukumodareyitha kwiSketchUp kumalunga nokubamba imouse yakho kunye nokwenza ezinye
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumanisa ukuba isebenza njani iSketchUp? Oko kuxhomekeke kwimvelaphi yakho kunye namava; Ngokubanzi, unokulindela ukwenza into ibonakale kwisithuba esingaphantsi kweeyure ezine. Oko akutsho ukuba uya kuba yintsimbi-oko kuthetha ukuba ijika lokufunda leSketchUp lilunge kakhulu. Awudingi ukwazi okuninzi ukuze uqalise, kodwa usaya kuthatha izinto iminyaka ukusukela ngoku.
Kodwa ngaba yiSketchUp lula? ISketchUp, ngaphandle kwamathandabuzo, ilula ngu Ngaphandle kwezinye iinkqubo zokumodareyitha, kodwa ukumodareyitha kwe-3D ngokwayo kunokuba yinkohliso. Abanye abantu bayabamba kwangoko, kwaye abanye abantu bathatha ixesha elide. Ukuba ufuna ukwakha iimodeli ze-3D kwaye uza kuba nemva kwemini, akukho ndawo ingcono onokuyiqala kuneSketchUp.
Iprojekti yesithathu yokulinganisa imodeli iza kwiincasa ezimbini ezisisiseko: eziqinileyo kwaye imiphezulu :
ISketchUp yimodeli yomgangatho. Yonke into ekwiSketchUp ngokusisiseko yenziwe ngamabhanti amancinci (amancinci ngokungapheliyo, eneneni) iindawo ezibiziweyo ubuso. Kwanezinto ezibonakala zingqindilili (njengodonga lwe-cinderblock) ziigobolondo ezingenanto. Ukwenza iimodeli kwiSketchUp kufana nokwakha izinto kwiphepha-ngokwenene, liphepha elicekeceke ngokwenene.
Imodeli zokujonga umphezulu ezinje ngeSketchUp zilungile ekwenzeni iimodeli ngokukhawuleza kuba yonke into oyifunayo kufuneka ukhathazeke ngayo kukubonisa ukuba zeziphi izinto jonga njenge. Oko akuthethi ukuba abanakho kangako; Kuphela ukuba zijolise ikakhulu ekubonakaliseni.
Sebenzisa iimodeli eziqinileyo kufana nokusebenza nodongwe. Xa usika imodeli eqinileyo kwisiqingatha, wenza iindawo ezintsha apho usika khona; Kungenxa yokuba izinto, zilungile, ziqinile. Iinkqubo ezinje ngeSolidWorks kunye ne-Autodesk Inventor zenza iimodeli eziqinileyo.
Abantu abenza iinxalenye-ezinje ngeenjineli zoomatshini kunye nabayili bemizi-mveliso-bathambekele ekusebenzeni ngeemodeli eziqinileyo kuba banokuzisebenzisa ukwenza izibalo ezichanekileyo. Ukubanako ukubala ivolumu yento kuthetha ukuba unokufumana ukuba ingakanani ubunzima bayo, umzekelo.
Kwakhona, oomatshini abakhethekileyo banokuvelisa izinto zobomi bokwenyani ngokuthe ngqo kwifayile yemodeli eqinileyo. Ezi prototypes ziluncedo ekuboneni ukuba zininzi kangakanani izinto ezincinci eziza kulunga kunye.
Inqaku elibalulekileyo lokuqinisa apha kukuba akukho luhlobo lubalaseleyo lwesoftware yokumodareyitha. Konke kuxhomekeke kwizinto ezintathu: indlela othanda ukusebenza ngayo, yintoni oyimodeli, kunye nento oceba ukuyenza nemodeli yakho xa yenziwe.
Olunye lweempawu ezintle (ezaziswa kwi-SketchUp Pro 8) iseti yezixhobo ezikuvumela ukuba usebenzise izinto ezizodwa eziqinileyo kwiimodeli zakho. Izixhobo eziQinisekileyo zinika indlela entsha yokusebenza kwiSketchUp.
Enye enye i-caatat: Inyaniso kukuba, ungahlulahlula iinkqubo ze-3D zokumodareyitha zibe ngamaqela amabini ngenye indlela: ngohlobo lwezibalo abazisebenzisayo ukuvelisa iimodeli ze-3D. Ungafumana zininzi iimodeli (apho iSketchUp ingumzekelo) kunye Ijika-esekwe (NURBS) iimodeli.
Uhlobo lwangaphambili lusebenzisa imigca ethe nkqo kunye nendawo ethe tyaba yokuchaza yonke into-kwanezinto jonga curvy, azikho. Olu hlobo lokugqibela lweemodeli lusebenzisa amagophe okwenyani ukuchaza imigca kunye nomphezulu.
Ezi zivelisa iifom zezinto eziphilayo, ezibalekayo eziyinyani ngakumbi kunezo ziveliswe ziimodeli ezininzi, kodwa oko kubeka uxinzelelo ngakumbi kwiikhompyuter ekufuneka zibalekile- kunye nabantu ekufuneka befumene indlela yokuyisebenzisa. Ekugqibeleni, kukurhweba phakathi kokulula kunye nenyani.
amanqaku kwinqanaba elincinci
lubisi lwe-magnesia isisu
Ixabisa malini i-rinvoq
I-hydrocortisone cream yezinja
ioyile yekrill vs ioyile yeentlanzi